Somaliland.Org » Wararka Wargeyska OGAAL, cadadkii Maanta, Khamiis, 29 Nov.
Wararka Wargeyska OGAAL, cadadkii Maanta, Khamiis, 29 Nov.
November 29th, 2007 Comments Off “Sool reer kuma duulin, arrintuna Geel iyo Adhi ma joogto”
Suldaan, horta Madaxweyne Rayaale maxaad isku seegteen?
Suldaan Cismaan Suldaan Cali Suldaan Madar…Waraysi gaar ah
Hargeysa (Ogaal)- Suldaan Cismaan Suldaan Cali Suldaan Madar ayaa waraysi khaas ah oo uu shalay siiyay wargeyska Ogaal, kaga hadlay arrimo kala duwan oo ku lug leh duruufaha siyaasadeed, dhaqaale, ganacsi iyo axwaasha guud ee marxalada dalka. Islamarkaana wuxu ku soo qaaday, arrimo kale oo la xidhiidha dhinac Killalka shanaad iyo dowlada Itoobiya.
Waraysigaasina wuxuu u dhacay sidan:
Ogaal: Suldaan waxa soo baryahan danbe la isla dhexmarayay warar sheegaya in dadka qaar wadaan arrimo la xidhiidha shir beeleed, Islamarkaana waxa la leeyahay Salaadiinta laftooda qaarbaa ku jira, arrintaa maxaad kala socotaa, maxaadse ka odhanaysaa? Suldaan Cusmaan. Arrintaa waxaan ka odhanayaa, runtii annigu ma arag cid shir beeleed wadda ama ka shiraysa, arrinkaana waxaan u arkaa iska Borobagaando la samaynayo oo la abuuray, shikhsiyana Salaadiin iyo cid kale oo arrintaa wada ma arag. Laakiin, shakhsiyana markaan ka hadlayo shir beeleed horena umma aaminsanayn immikana ma aaminsani oo ma qabo in shirbeeleed maanta wakhtigiisii taaganyahay, waa xili la soo dhaafay. Markaa annigu fikirkaan ka qabaa waxa weeye, in xiligaa laga soo gudbay oo maanta loo soo gudbay, Qaran Dastuur, nidaam iyo xisbiyo leh, markaa cidda la badalayo ee xilka loo garan waayana in nidaamkaa lagu badalo ayaan qabaa, cidii lagu badalayo ee loo gartana inay nidaamkaa ku shaqayso ayaan qabaa. Laakiin ma qabo wax shirbeeleed la yidhaa.
Ogaal: Waxyaabaha hada socda ee la hadal hayo waxa ka mid ah, ganacsiga dhoofka xoolaha oo Xukuumadu heshiis kula gashay Ganacsade Sucuudiyaan ah, Ganacsatada wadaniga ah qaarkoodna way ka cabanayaan oo waxay ku doodayaan in Xoolihii nin kaliya gaar loogu xidhay, taasina ay xanibtay horu socodkii suuqa ayna saamaysay Sayladihii xoolaha iyo noloshii bulshada, maxaad kala socotaa addigu taa?
Suldaan Cismaan: Arrinkaasi waa arrin aad iyo aad u miisaan leh, waa arrin noloshii dadka si dhab ah u taabtay, xoolaha nooli waa dhaq-dhaqaaqa qudha ee dalka ka jiray ee ummadu ku nooshahay 95% hadaanay ka badnayn, markaa xayiraadaa xoolaha la saaray waa arrin aad dadka dhibaato ugu haya, waana wax sharciyada dalka ka baxsan, oo aad arkayso xukuumada maanta jirtaa in maalinba maalinta ka danbaysa ay sharicigii dalkan loo dhigay ee ummadani dhigatay ay meel iska dhigtay oo iyagu ragan maanta xukuumada hogaamniyaa nooc (Sharci) ay iska samaysteen ay ku dhaqayaan. Markaa, xaga sharciga marka laga eego waa khalad weyn oo ummada laga galay iyo dalka, xaga nolosha marka laga eegana, maanta waa mid cidhiidhi badan ku haysa, waxaanan odhan lahaa oo aan leeyahay oo aanu leenahay si deg-deg ah arrinkaa xukuumadu ha u badasho oo xoolaha xoriyadoodii iyo qaabkii looga ganacsan jiray ha u sii dayso, oo ninkaa ajannabiga ah ee xoolaha kootada dowaladu ugu xidhay inay ka noqoto ayaan aad iyo aad ugu boorinayaa. Oo ummada maanta bakhtiga iyo dhibaatada ku jirta, ilaa ka miyiga illaa ka halkan, (Magaalada) Ummadu waxa ay ku noolayd waa xoolaha nool,
Ogaal: Suldaan dhoofkii xooluhu wuu socdaa oo ismuu taagin, haatana wararku waxay sheegayaan in dekadu Barberi ay ku mashquulsantahay dhoofkii xoolaha moosinka xajka Awgii. Markaa, maxaad ku cabiraysaa dadka bakhtiyay ee aad sheegayso?
Suldaan Cismaan: Addeer annagu dadkaanu raacnaa, maalinta ay dadka wax u kordhaana waanu ognahay, maalinta dadka ay dhibaato ku timaadana, dhibaatadu halka ay gaadhsiisantahay waanu ognahay. Madaxdhaqameed ayaanu nahay, ninkii aan danaynayn isaga ayay u taallaa, laakiin, hadaanu madaxdhaqameed-nahay waxaanu eegnaa, waa walba maxaa ugu baryay dadka. Yacni waxa weeye, Bakhtigu dad gaajo u dhintay ma hayno, laakiin, markaad eegto nolasha ay maanta dadku ku suganyihiin ee ay arrinaasi u gaysatay waa arrin mushkiladeeda iyo dhibteeda leh oo aad u culus. Mida kale, xoolaha dhoofayaa waa xoolo kooban weeye, maaha xoolihii u dhoofi jiray dalalka kala duwan. Laakiin, markii immika xoolihii loo xidhay Al Jabiri, dee waad ogtihiin oo xolihii waxay noqdeen, xoolo Kooto ku jira oo nin qudhihi iska leeyahay, sicirkoodii iyo nidaamkoodiiba. Ta kale, waxay sababtay in xoolihii dhulal kale u talaabaan, dad kale ka faa’iidaystaan. Markaa waxaanu leeyahay kootadani waa arrin aad u culus oo dhibaato weyn dadka ku haysa, waayo xooluhu waa ishii kali ahayd ee dadku ku noolaa. Markaa waxaan leeyahay waa inay xukuumadu arrinkaa dib ugu noqoto.
Ogaal: Addigu ka Suldaan ahaan, arrintan miyaad kala xidhiidhay xukuumada, oo aad si toos ah ugu bandhigtay dhibaatadan aad sheegayso inay yeelatay?
Suldaan Cismaan: Haa, In badan baanu kala hadalay anniga iyo Salaadiin kaleba waanu ka hadalay, dad badan oo kalana way ka hadleen, Maalin waalinba jaraa’idka way ku qorantahay, markaa cid aan kala hadlini ma jirto, ficliyana waa loogu bandhigay xukuumada. Laakiin, ilaa immika waxay ka soo celisay oo jawaab ah oo ay wax kaga badalayso lagama hayno.
Ogaal: Dhinaca siyaasada marka la eego, addiga hada waxa lagugu tiriyaa, Salaadiinta mucaaradka ku ah Xukuumada. Markaa, maxaad horta Madaxweyne Rayaale isku seegteen?
Suldaan Cismaan: Horta, waa xaqiiqa xukuumadu maanta nidaamkan ay wax ku hogaaminayso inaan aad u diidanahay. Waxaan ku diidanahay-na shakhsi maaha, ee waxa weeye, annigu markaan Suldaan ahaan sidan leeyahay waxa weeye. Waxaan diidanahay waxa weeye, Saldanadu waxay ilaalisaa wixii dadku dhigteen maamulka markaa jiraa ma fulinayaa, ummada ma u adeegayaa, ma waddaa wixii ummada dayacan horumarkeeda iyo daneheeda ah. Markaa, xukuumadan in badan ayaanu talo siinay, in badan ayaanu kala talinay. Waxaanu ka eegaynay inay dawlad tiro yar oo tayo leh samayso, nidaam wanaagsan dalka ku hogaamiso si dadku u koro doorashooyinka marka la galo. Markii wixii waxaas oo dhan ay dhag u dhigi weyday xukuumada maanta jirtaa. Markaa, diidmadaydu waxay ku salaysantahay waxa weeye, xukuumada oo aanu arko inay garab martay wixii ummadu u igmatay oo aan ku socon. Sharcigii garab martay oo aan ku socon, oo aan tallo soo jeedin qaadanayn, oo nidaamkii dalka oo dhan intay meel iska dhigtay ku socota qaabkii had iyo jeer Kali talisku ku dhaqmi jiray.
Ogaal: Laakiin, Suldaan mudo badan oo hore ayaad xukuumada aad isugu dhawaydeen, Madaxweyne Rayaalana aad isugu dhawaydeen. Markaa, berigaa hore taladan aad leedahay hada ma qaadanayo, miyuu kaa qaadan jiray?
Suldaan Cismaan: Intaa horeba waa intii aanu talada u jeedinaynay ee aanu mar walba lahayn, sidaa ka daa sidaa ka d’u oo sidaa samee. Markaa, taasiba waa taan ka hadlayo. Talada badan ee aanu inta badan soo wadnay waxay ahayd, inuu nidaamka dalka ku hogaamiyo wixii ummadu dhigatay ee xukuumada u igmatay iyo sharciga yaala. Markii ay waxba naga dhagaysan waayeen isaga iyo rag kaleba, runtii taas weeye ta khilaafkayaguba ka dhashay.
Ogaal: Siyaasiyiinta Ururka Qaran ee ku xidhan xabsiga Mandheera, Madaxweynuhu wuxuu sheegay in haddii ay cafis soo qortaan uu subaxdaaba sii daynayo, adigu ka Suldaan ahaan sideed u aragtaa?
Suldaan Cismaan: Annigu waxaan u arkaa sharci darrada aan ka hadlayo inay ka mid yihiin madaxda Qaran ee xidhani. Waayo, nin muwaadin ah oo yidhi xaqbaan u leeyahay inaan siyaasada kaga qaybgalo Urur siyaasadeed oo aan samaystay. Waxa weeye, sharciyada xadhig kamuu mutaysan, wax danbi ah oo uu dalka ka galayna ma jiro. Laakiin, sharciyada uu ka hadlay in lagu qanciyo, isagoo halkii iska jooga oo aan xoriyadiisa iyo muwaadinimadiisa iyo xaqa uu siyaasada u leeyahay lagu gafin ayay ahayd. Laakiin, xadhigu waa waxaan ka hadlayo ee aan leeyahay xukuumadu way garab martay wixii umadani u igmatay, sharci darada wadanka ka taagan ayaanay ka midtahay. Waxaanan mar labaad iyo mar sadexaadba ku celinayaa horena aan u soo jeediyay, cafis ha soo qortaan iyo waxaasi waa geed ku meeraysiye. Madaxweynaha waxaan leeyahay ha sii daayo madaxdaa siyaasiyiinta ah ee ku xidhan waxaan sharciga waafaqsanayn. Shariciga ay ku doodayaan inay siyaasada ku tartamaan iyo Ururka ay doonayaan sharci baa yaale, haloo noqdo, hadii ay xaq u yeeshaana hala siiyo hadii aanay xaq u lahayna..
Ogaal: Xukuumadu waxay taagantay maxkamad ayaa xukuntay, markaa hadii aanu odhan Madaxweynuhu cafis ha soo qortaan, dariiqa kale ee u furani muxuu yahay?